I-HTC U11, U11 + kunye ne-U12 + ziya kufumana iPie ye-9 XNUMX kungekudala | I-Androidsis
Sele siyazi xa i-HTC U11, U11 + kunye ne-U12 + izakuhlaziywa kwi-Android 9 Pie
UNerea Pereira | | nokuVavanyelwa
Umvelisi waseTaiwan akaya kwelona xesha lilungileyo. Ulwahlulo lwalo ngomnxeba luza kunyamalala, nangona luyaqhubeka ukunika izoyikiso zalo zokugqibela ngolwaziso olulandelayo IHTC blockchain apho ifemi isebenza khona. Kwaye namhlanje, i-HTC isimangalisile sonke ngokubhengeza uhlaziyo ku I-Android 9 ye-HTC U12 +, i-HTC U11 + kunye ne-HTC U11.
Besisele sazi ukuba zombini i-HTC U11, i-HTC U11 + kunye ne-U12 + zizakufumana inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kaGoogle, nangona besingawazi owona mhla. Ngoku, inkampani iye yapapasha i-tweet apho baqinisekisile ukuba olu hlaziyo luza kufika nini kwi-Android 9 Pie.
Le yimihla apho i-HTC U11, U11 + kunye ne-U12 + ziya kufumana i-Android 9 Pie
Inkqubo I-Android 9 Pie yavela ngaphezulu konyaka odlulileyo. Kwaye ngoku, ngenxa yeengxaki elihamba nazo icandelo lokuhamba, ukuba bathathe isigqibo sokuyongeza kwezona zixhobo zibalulekileyo zenkampani. I-HTC igqibe kwelokuba ipapashe i-tweet enemihla apho iiterminal nganye ziya kuhlaziywa khona kwi-Android 9 Pie. Okokuqala, sine-HTC U11, eya kuyifumana ngoMeyi 2019. Ilandelwa yi-HTC U11 +, eya kuba sekupheleni kukaJuni walo nyaka kwaye, ekugqibeleni, i-HTC U12 +, ngaphambili kwangoko, njengoko izakuba phakathi kuJuni 2019.
Ewe ewe, iya kuba ziifowuni zakudala zolu phawu ezinokuhlaziywa I-Android 9 Pie ngaphambi kokunye. Kwaye izakuba phakathi kwale nyanga kaMeyi, kunye nokuphela kukaJuni xa izixhobo ze-HTC zifumana i-Android 9 Pie.
Nangona oku kuye kwavela kungothusi, kuba abanye abavelisi babhengeze uhlaziyo kwi-Android 10 Q, engekabhaptizwa ngegama elisemthethweni. Kodwa ayisiyiyo idatha engaqhelekanga, inikwe iimeko zemfazwe i-HTC ehlangabezana nayo ukuba inganyamalali. Iindaba ezimnandi zezokuba abasebenzisi abanazo naziphi na ii-mobiles, sele uyazi ukuba uza kulufumana nini uhlaziyo kwiPie ye-9.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Sele siyazi xa i-HTC U11, U11 + kunye ne-U12 + izakuhlaziywa kwi-Android 9 Pie
I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL ngekhe zikwazi ukufaka i-Android Q beta kude kube nguJuni
I-Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition: Olu lushicilelo olukhethekileyo lomdyarho wesiginitsha yeflegi